आलु, प्याज, गोलभेडा र लसुन भारतबाटै - Arunkhabar.com
प्रकाशित : २७ श्रावण २०७५, आईतवार १०:५७
विराटनगर, २७ साउन । विराटनगरबासीको भान्साघरमा तरकारी, अचार र मसलाको रुपमा दैनिक प्रयोग हुने आलु, गोलभेडा, प्याज र लसुनको ठूलो हिस्सा भारतबाटै पैठारी हुने गरेको छ । यस्ता वस्तुहरुको ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म हिस्सा भारतबाट आउने गरेको विराटनगरका तरकारी व्यवसायिहरु बताउँछन् ।
तरकारीको रुपमा दैनिक प्रयोग हुने आलुको ७० प्रतिशत हिस्सा भारत, बंगलादेश र भुटानबाट आउने गर्दछ । विराटनगर र त्यसको आसपासको बजारमा हुने आलुको कुल मागको ३० प्रतिशत हिस्सा मात्र नेपाली आलुले धानेको विराटनगरका आलु व्यवसायी सुरज गुप्ताको दाबी छ । नेपालमा उत्पादित आलुमध्ये मकुवानपुरको आलुको बजार निकै राम्रो रहेको उहाँको भनाई छ । यो आलु स्वादिलु भएकाले वजारमा यसको निकै माग छ तर यो आलु साउनसम्ममा सकिन्छ ।
नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने आलु पनि निकै स्वादिलो छ तर यो महेन्द्र राजमार्ग आसपासकै बजारमा खपत हुने र विराटनगरसम्म आइनपुग्ने अर्का व्यवसायि पशुपति भगत बताउनु हुन्छ ।
साउनको अन्तिम साता देखि नेपालमा भूटानी आलु भित्रिने र यो कात्तिक सम्म चल्ने गरेको व्यवसायिले बताएका छन । “भूटानसँगै बंग्लादेश र भारतबाट भित्रिएको आलुले यहाँको आलु बजारको ठूलो हिस्सा ओगट्छ । विराटनगर र यसको आसपासको बजारमा छ महिना भन्दा बढी भारत र बग्लादेशकै आलुको दबदबा हुन्छ ”– आलु व्यवसायि भगतले भन्नुभयो ।
आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा जोगवनी नाका भएर भारत लगायत अन्य मूलुकबाट ३५ करोड ३६ लाख ८१ हजार मूल्य बराबरको एक करोड ६४ लाख २८ हजार किलो आलु नेपाल भित्रिएको विराटनगर स्थित रानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । जोगवनी नाकाबाट भित्रिको यो आलु विराटनगर आसपासकै बजारमा खपत हुने व्यवासायि बताउँछन् ।
त्यसो त पूर्वी नेपालमा आलुको उत्पादन हुँदै नहुने होइन । पूर्वक्षेत्रमा ७० हजार ५२८ हेक्टरमा आलु खेती हुने र त्यसबाट नौ लाख ५१ हजार मेट्रिकटन भन्दा बढी आलु उत्पादन हुने गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनलयले बताएको छ । तर यो उत्पादन बजारमा हुने मागको तुलनामा निकै कम हुने व्यवसायिको भनाई छ ।
नेपाली भान्सामा दैनिक भित्रिने गोलभेडाको अवस्था पनि झण्डै उस्तै रहेको छ । पूर्वी पहाडको इलाम, पाँचथर र धनकुटामा गोलभेडाको उत्पादन निकै राम्रो हुन्छ । तर यो झण्डै तीन महिना मात्र रहने भएकाले बाँकी अवधि नेपाली उपभोक्ता भारतकै गोलभेडामा निर्भर हुनु पर्दछ । नेपाली गोलभेडा जेठ देखि भदौ सम्म पाइने र असोज देखि बैशाखको अवधि भारतीय गोलभेडा नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायि गौरीशंकर भगत बताउनुहुन्छ । आ.ब. २०७४/०७५ भारतबाट एक करोड ५६ लाख ९३ हजार मूल्यको आठ लाख ७४ हजार किलो गोलभेडा जोगवनी नाका भएर नेपाल भित्रिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा पाँच हजार ७१८ हेक्टर क्षेत्रमा गोलभेडाको खेती हुने र जसबाट बार्षिक एक लाख २९ हजार मेट्रिकटन भन्दा बढी गोलभेडा उत्पादन हुने गरेको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ । तर यो उत्पादनले स्थानीय बजारको मागलाई धान्न सकेको देखिदैन ।
लसुन र प्याजको अवस्था पनि झण्डै उस्तै छ नेपालको प्याज र लसुनले कुल मागको १० प्रतिशत बजार पनि धान्न नसकेको व्यवसायिको भनाई छ । बजारमा रहेको मागको आधारमा जति उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यति उत्पादनका लागि सरकारको ध्यान नपुगेको उनीहरुको आरोप छ । त्यसैले त्यो मागलाई पुरा गर्न भारतमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
स्थानीय बजारको माग पुरा गर्न अधिकांस प्याज भारताबट पैठारी हुने गर्द छ भने लसुन चीनबाट पनि आउने गरेको विराटनगरका एक व्यवसायि बताउँछन् । गएको आ ब २०७४/०७५ मा जोगवनी नाका भएर भारतबाट रु ३७ करोड ४५ लाख मूल्यको एक करोड १३ लाख २७ हजार किलो प्याज र रु सात करोड दुई लाख मूल्यको आठ लाख ४४ हजार किलो लसुन नेपाल भित्रिएको विरानगर स्थित रानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका अनुसार पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा आठ हजार ८३६ हेक्टर क्षेत्रमा प्याज र एक हजार २८९ हेक्टर क्षेत्रमा लसुनको व्यवसायिक खेती हुने गर्दछ ।
जसबाट ९७ हजार २३९ मेट्रिक टन प्याज र छ हजार १४० मट्रिकटन लसुन उत्पादन हुने गर्दछ । यसरी बजारमा देखिएको मागको आधारमा योजना बनाएर उत्पादनमा लाग्ने हुने भने तरकारीको नाममा बर्षेनी बाहिरिएको पैसा नेपालमै रोक्ने मात्र होईन त्यसले बिदेसिने यूवा शक्तिलाई पनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दछ ।
खोला आसपासमा पौडी खेल्न जान्ने प्रहरी राखिदै
उच्च ज्वरोका एक विरामी रंगेली अस्पतालको आईसोलेशनमा
विराटनगर, १० चैत । मोरंगको सुनवर्षी ५ का एक युवकलाई रंगेली अस्पतालको आइसोलेशन वार्डमा राखिएको...
buy Cialis Black online cheap, buy lioresal online. विराटनगर, ९ मंसिर । विराटनगर–१० शान्तिचौकका परमानन्द...